Global Voices teny Malagasy » Iran: Tandindonin-doza i Hossein Ronaghi, mpitoraka bilaogy voafonja · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Febroary 2011 16:57 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Candy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Zon'olombelona
Ilay mpitoraka blaogy Iraniana Hossein Ronaghi Malki  dia manefa sazy 15 taona an-tranomaizina  any amin'ny trano tsara aron'ny Fonjan'ny Evin, tsy mahazo mifandray amin'ny fianakaviany na ny mpisolo vava azy. Mojtaba Samienejad, mafana fo mpiaro ny zon'olombelona sady sekreteran'ny Trano Misahana ny Zon'olombelona any Iran, dia nilaza tamin'ny BBC Persiana fa mila fandidiana maika i Ronaghi ary efa ahiana mafy ny toe-pahasalamany. Nilaza izy fa nanamafy ny mpitsabo tao amin'ny tobim-pitsaboan'i Evin fa mila afindra any amina hopitaly izy hodidiana avy hatrany, nefa tsy nanao na inona na inona ny manampahefana.
Avotsory Hossein  [fa] dia hetsika fanentanana amin'ny aterineto natombok'i Omid Habibnia, mpitoraka blaogy sady mpanao gazety. FreeHossein dia mitonon-tena ho ‘kaomity hanarahana ny raharahan'i Hossein”. Araka ity  fanentanana ity:
Manana mpankafy manodidiana ny 1500 eo ho eo ny pejy Facebook-n'ity fanentanana ity. Mafana fo mpanao politika maherin'ny 100 ihany koa no nanoratra  taratasy misokatra ary nangataka ny fitsarana Iraniana ny antony mahatonga azy ireo hasiaka be toa izany amin'i Hossein, mpianatry ny Anjerimanontolo Azad any Arak.
Nisambotra mpitoraka bilaogy maro ny manampahefan Iraniana nandritra ny taona vitsivitsy farany teo. Omid Reza MirSayafi  no mpitoraka bilaogy voalohany maty am-ponja tamin'ny 18 Martsa 2009 noho ny antony mampiahiahy. Ilay mpitoraka bilaogy malaza erantany Hossein Derakhshan  dia nosaziana 19.5 taona tamin'ny taon-dasa, ary Shiva Nazar Ahari , vehivavy mpitoraka bilaogy,dia nosaziana karavasy 74 sy enin-taona an-tranomaizina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/02/24/13108/
 manefa sazy 15 taona an-tranomaizina: http://www.rahana.org/en/?p=9653
 Avotsory Hossein: http://freehossein.com
 Araka ity: http://freehossein.com/?p=19